Solar Panels Cell, Standard Solar Panels, Small Size Solar Panels - Amso
Amso Solar dia manokana amin'ny famokarana sela sy masoandro panneaux solaires izay niantoka ny antoka tamin'ny 25 taona. Ny tsipika famokarana tontolon'ny masoandro dia manarona ny andian-dahatsoratra 5BB sy 9BB, elanelam-potoana 5w ka hatramin'ny 600w.
9BB 144 sela antsasaky ny tontolon'ny masoandro mono ...
9BB 144 antsasaky ny sela solar panels mono 430w
Tela 72 haben'ny fenitra takelaka mainty mono mono ...
Tela-masoandro Mini tontonana namboarina sela poly 20w
Amso Solar Technology Co., Ltd. dia mpamokatra panneaux solaires izay novolavolaina nandritra ny 12 taona. Manana traikefa feno amin'ny serivisy OEM sy ODM izahay. Nandritra ny taona lasa, nanangana orinasa tery izahay miaraka amina marika maro sy mpanamboatra ambaratonga voalohany. Niorina tamin'ny fomba ofisialy tamin'ny taona 2017 izahay mba hitondra ny marika manokana: Amso Solar. Ny orinasa misy anay dia mifanila amin'ny farihy HongZe tsara tarehy, izay any Huaian, JiangSu, Sina.